Halkee ku dambaysay xaaladda Franck Kessié?! (Xogtii ugu dambaysay) – Gool FM
Halkee ku dambaysay xaaladda Franck Kessié?! (Xogtii ugu dambaysay)
(Milano) 31 Maajo 2017 – Wax walba waa dhag, Franck Kessie wuxuu berriba noqonayaa laacib ka tirsan kooxda AC Milan kaddib markii uu Talaadadii maray qaybta hore ee caafimaadka, iyadoo maanta qiimayn dheeraad ah lagu sameeyay dhibaato yar oo soo baxday taasoo uu ku baasay.
Waxaa haatan haray waa tijaabo kooban oo uu ku mari doono shaybaarka caanka ah ee Milan Lab oo ku yaalla xerada tababarka ee Milanello taasoo ahayd middii horay loo qoondeeyay inuu maanta maro balse ay booskeeda gashay xallinta arrintan, isagoo kaddibna qalinka ku aasi doona qandaraas 5 sanadood ah.
DOOD DHANKA DA’DA AH?
Kaddib markii uu tijaabada 1-aad ku maray La Madonnina, ee la sheegay inay jirto dhibaato yar, waxaa saaka xigey warar laga soo xigtey warside la yiraahdo Afrique Presse (il la isku hubo ma aha), kaasoo dood geliyay da’da Kessié’ oo uu sheegay inuu dhashay 1991-kii, waxaase haatan la sheegay inay sax tahay da’da uu laacibku sheegtay oo ah inuu 19-kii Diseembar 1996-kii ku dhashay Ouraghaio, Ivory Coast, sidaa darteedna wararkii maanta soo baxayay ay yihiin ku tiri kuteen uun.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Italy vs San Marino 8- 0 (Da'yarta Talyaaniga oo ku dooddiyey difaaca bololka ah ee San Marino)
Mourinho oo ogolaaday in la fasaxo Anthony Martial